Actorylọ Ọrụ Nchedo Egwuregwu - Ndị na - emepụta Nchedo Egwuregwu China, Ndị na - enye ya
Emere velcro nke nwere ihe nrụgharị ruru eru ruru ogo iri anọ na anọ, dịkwa mma iru ala ma na-ahụ anya n'okpuru mgbatị ahụ. Ọ na - enyere aka ịkwalite ahụ gị maka ị burnụkwu calorie ma belata mmiri mmiri na mpaghara a yana iku ume. N’adịghị ka eriri ndị ọzọ na-agbatị agbatị, eriri a nwere akpa, yabụ ị nwere ike itinye ekwentị, ego, igodo, kaadị kredit na ihe ndị ọzọ n’akpa gị mgbe ị na-emega ahụ.
Igwe na-akwado ise dị iche iche na-enyere nkwado aka ma na-enye nchedo ka mma, akwa na-eku ume na nke dị mma bụ akpụkpọ anụ. Ikike dị mfe ma dị mfe iyi ma n'ime ma n'èzí. Udiri eriri elu abụọ gbara agba ga - enyere gị aka idozigharị mgbakwunye ma nwekwuo ndozi nke ukwu. Belata ihe mgbu lumbar gị ma mee ka ukwu gị kwụ ọtọ, dabara adaba maka oge niile.
Nkwado ukwu nke magnetik
Kwe ka usoro ije zuru oke ka ị na-enye nkwado dị mma. Eriri ndị na-agbazi imegharị na-enye ihe kwesịrị ekwesị na mkpakọ. Ogwe osisi na-ahapụ oke okpomọkụ na mmiri. Ezubere maka mma kwesịrị ekwesị iji belata ịmịcha na ịmịcha. Magnetik dị mma na-ewepụ oyi ma mee ka ị na-ekpo ọkụ, na-eme ka ọbara na-agba ume ịkwalite metabolism.